कसरी किन्ने यमन विरुद्धको खेलको टिकट? | Hamro Khelkud
कसरी किन्ने यमन विरुद्धको खेलको टिकट?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – एन्फाले यमनविरुद्धको खेलका बेच्ने भनिएको सात सय टिकट इसेवा मार्फत बेच्ने आज एक कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिएको छ। १ हजार रुपैयाँ तोकिएको टिकट किन्ने प्रक्रिया निम्न रुपमा रहेको छ:
१. टिकट इसेवाको खाता भएका समर्थकहरुले https://football.esewa.com.np/ मा गएर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि आफूसँग इसेवा खाता छैन भने नजिकको इसेवा एजेन्टमार्फत पनि टिकट खरिद गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा इसेवाका ५ हजार एजेन्ट शाखा र नेपालभर २५ हजार एजेन्टहरु रहेका छन्।
टिकट खरिद गरेका समर्थकहरुले खेल हेर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचय पत्र देखाउनु पर्ने नियम रहेको छ। टिकटमा समर्थकको नाम र फोन नम्बर उल्लेख रहने हुनाले कालोबजारी पूर्ण रुपमा रोकिने एन्फाले जनाएको छ।
टिकटिङको लागि एन्फाले इ सेवासँग दुई वर्षको सम्झौता भएको बताए । सम्झौता अनुसार इ–सेवाले लिग लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको टिकटको जिम्मेवारी पनि पाएको छ । इ–सेवाको प्रमुख कार्यक्र अधिकृत रोशन लामिछानेले एन्फासँग इ–सेवा जोडिन पाउदा खुशी लागेको बताए ।